Ihowuliseyili rosin bag bag kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
I-nylon rosin yobushushu yeefilitha zokucoca ubushushu sisona sisombululo sisiso ekwenzeni izicatshulwa ezicocekileyo nezinganyibilikiyo ngaphandle kokusebenzisa naziphi na iikhemikhali okanye izinyibiliki. Iingxowa zethu zenziwe nge-100% yenylon, kwaye itywinwe ngetekhnoloji ye-welding ye-ultrasonic, enokuthintela umgubo ekuvuzeni kumthungo. Iingxowa zethu zisebenza kakuhle nangayo nayiphi na i-rosin cofa kwimarike.
Igama lemveliso: Ukutya iBanga leRosin Cofa iMicron yokuCoca
Isiqinisekiso: I-FDA, i-LFGB (iqinisekisiwe i-TUV)
Ubukhulu: 1.25 "x3.25", 1.75 "x5", 1.75 "x8", 2 "x3.5", 2 "x6", 2 "x4.5" /2.5 "x4.5",
Indawo enemingxuma: 25um, 37um, 45um, 73um, 90um, 120um, 160um, 190um, 220um, okanye ukuvula okwenziwe ngokwezifiso
Uhlobo lokutywina: Ukuthunga (ingxowa ijike ngaphakathi ngaphandle) okanye i-Ultrasonic welding (ingenamthungo)
Ubushushu obukhulu: 300ºF okanye 150ºC
Igama lebrand: Macrokun
Ukupakisha: 10pcs okanye 100pcs / ibhegi okanye njengemfuneko sakho
Esinye isicelo: I-Rosin ikhupha ibhegi yokuhluza, ibhegi yeti, ukuhluza ukutya, ukupakisha ukutya, ibhegi yokuhluza ikofu njalo njalo.
Uhlobo lweHemming Product
Yenziwe nge-100% ye-polyester monofilament mesh, iingxowa zethu ze-rosin zenzelwe ukumelana namaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-300 ° F. Izandla zithungelwe eTshayina, iibhegi zethu azinazo iikhemikhali ke ngoko unika imveliso ekumgangatho ophezulu kuwo onke amaphepha.
Amanyathelo okuSetyenziswa kweMveliso
Lahla okanye ukhuphe imathiriyeli yakho kwindawo ebanzi yeFreyPressPress Funnel.
Shiya isixa esincinci sezinto zebhegi ye-rosin evulekileyo phezulu.
Nciphisa nayiphi na into engaphezulu.
Songa ibhegi yakho ngaphezulu kwaye ukulungele ukucofa!
Egqithileyo ibhegi yobisi nut
Okulandelayo: ingxowa yewayini lokucoca ulwelo